ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူကို လက်ခံကြပြီဆိုရင် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပါပြီ (မောင်ဝံသ) | MoeMaKa Burmese News & Media
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်က သမတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုမူ လို့ လက်ခံလာသလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာလည်း ဖယ်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲထွက်ရေးမဟုတ်ဆိုတာကို ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် သိရှိလာတယ်။ အဘိုး၊ အဖေနဲ့ အန်ကယ်ကိုယ်တိုင် ထောင်ကျခံပြီး ဖယ်ဒရယ်ကို နားလည်လက်ခံလာအောင် ကြိုးပမ်းရကျိုးနပ်တယ်” လို့ ပြောလိုက်တာဗျ။
“အေး ကောင်းတယ်၊ အဲဒီအတိုင်း ရေဒီယိုက အသံလွှင့် ကြေညာလိုက်” လို့ ပြောခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီဖော်ပြချက်သာ မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းဟာ ဖယ်ဒရယ်မူကြောင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲမှာကို တကယ်ပဲ စိုးရိမ်ပြီး အာဏာသိမ်းတာမဟုတ်ပဲ သိမ်းချင်လို့ သိမ်းပြီးမှ ဖယ်ဒရယ်မူ နဲ့ ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲမယ့် အနရာယ်ဆိုတာကို တမင်သက်သက် ဆင်ခြေဆင်လက် ဆင်နားရွက်လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။
“ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုကွဲ မဲ့ အနရာယ် အမှန်တကယ်ရှိနေပြီလို့ ကျုပ်ကို နှစ်မိနစ်လောက်ပဲ ကြိုပြောပါ။ အာဏာသိမ်းစရာမလိုပါဘူး၊ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် တပ် မတော်ကို အာဏာအပ်မှာပါ”
လို့ ပြောခဲ့တာကို ၁၉၆၆ခု စက်တင်ဘာလက သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နားနဲ့ဆတ်ဆတ် ကြားခဲ့ရပြီး သတင်းရေး ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးနုလည်း အခုအချိန်မှာ မရှိတော့ပြီမို့ ဒီကိစ္စကို ရာဇ၀င်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့ … လို့ ဆိုရတော့မပေါ့ဗျာ။
တပ်မတော်ခေါင်း ဆောင်တွေက ဖယ်ဒရယ်မူဆိုတဲ့စကား ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြောတဲ့သူကို မျက်ထောင့်နီကြီးတွေနဲ့ ကြည့်၊ ဖယ်ဒရယ်မူကို ကိုင်စွဲပြီး မိမိ လူမျိုးစု အခွင့်အရေး (nationality’s rights)အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေ သူတွေကို လူမျိုးစုသောင်းကျန်းသူတွေအဖြစ် ရှုမြင်လာကြရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကင်းမဲ့ပြီး ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းမနီး ဖြစ်လာခဲ့တာ အခုတိုင်ဖြစ်တယ်ဗျ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမှ မရ တော့လည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကာမှာ မပြောနဲ့ ဒေသတွင်းမှာ တောင် ဓားမနောက်ပိတ်ခွေးဖြစ်တာ ဘာဆန်းသလဲဗျာ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံလို့ တရားဝင် ခေါ်ထားပေမယ့် တိုင်းရင်းသားတွေကတော့” ပြည်ထောင်စု အမည်ခံ တစ်ပြည်ထောင်တည်း” အဖြစ် တစ်လျှောက်လုံး ရှုမြင်ခဲ့ကြ တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လိုချင်ကြတယ် ဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရင်ထဲက အဲဒီအမြင် ပပျောက်လွင့်စင် သွားအောင် လူများစုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေက လုပ်ဆောင်ကြ ရမှာ ဖြစ်တယ်ဗျ။ ဒီတော့မှသာ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့မယ့် အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်ကတော့ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ သေနတ်သံ တွေ မစဲသေးဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြားရတိုင်း လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ တိုင်းရင်းသား သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး ဗိသုကာ၊ အမျိုးသားခေါင်း ဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စကား တစ်ခွန်းကိုပဲ အမြဲ ကြား ယောင်မိတယ်ဗျာ။ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ပြည်နယ် ခွဲထွက်ခွင့် ပုဒ်မထည့်ဖို့ ကိစကို မြန်မာခေါင်းဆောင်တချို့က ကန့်ကွက်ကြတော့ ဗိုလ်ချုပ်က …
“အိုဗျာ..ဒီဆယ်နှစ်အတွင်း ပြည်နယ်တွေ ခွဲမထွက်ချင် အောင် ကျုပ်တို့ ဗမာတွေက ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ဒီလိုမှ မကြိုးစားနိုင်ရင် ကျုပ်တို့ ညံ့လို့ပေါ့”
(မှတ်ချက်။ ။ ၁၉၆၁-၆၂မှာ အတိအလင်း တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ရှမ်းမူလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဖက်ဒရယ်မူ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူ အကြောင်းနဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာလိုသူများ ‘မြန်မာ့သမိုင်းဖြစ်ရပ်အမှန်များ ရေးသားပြုစုရေးအဖွဲ’ က စိစစ် ထုတ်ဝေတဲ့ ]]၁၉၅၈-၁၉၆၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး}} တတိယတွဲ အခန်း၁၃၊ ယင်းစာအုပ် စတုတတွဲ အခန်း ၁၄၊ အခန်း ၁၅၊ အခန်း ၁၆၊ ထို့အပြင် အခန်း ၁၇ စာမျက်နှာ ၂၃၅ အောက်ခြေမှတ်စုပါ ၁၉၆၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ပြည်လမ်း အသံလွှင့်ရုံ လူမျိုးပေါင်းစုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ဦးထွန်းမြင့်(တောင်ကြီး) ပြောကြားသော မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက် တို့ကို စေ့စေ့စပ်စပ် ဖတ်ရှုလေ့လာ ဆင်ခြင် စဉ်းစားသင့်ပါကြောင်း။)
5 Responses to ပြည်ထောင်စု စစ်စစ်မူကို လက်ခံကြပြီဆိုရင် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း မဝေးတော့ပါပြီ (မောင်ဝံသ)
U Aye on October 31, 2012 at 7:46 am
Thanks U Won Tha. Please educate to the people and arm forces regarding the reality of history.
ဘုရင် on October 31, 2012 at 2:46 pm
ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေခေတ်မှာ ခေတ်ဟောင်းကအမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှားဖြစ်ဖြစ် အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး။ဒီကနေ့ နိုင်ငံ မှာဖြစ်စေချင်တာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းသာသာယာယာဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
ကချင်နဲ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေ နှစ်ဖက်စလုံးကရပ်ဆိုင်းပေးပါ။ တစ်ဘက်ထဲရပ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ များလာနေပါတယ်။ လူတွေရဲ့ လူ့စွမ်းအားတွေဟာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နှမြောစရာကောင်းလှပါတယ်။
ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ (တတိယအကြိမ်)ဆိုတာပေါ်လာဖို့ လုံခြုံရေးတွေ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပေးပါ။ ဘယ်ဘက်မှ မျက်နှာမလိုက်တဲ့လုံခြုံရေးတွေလိုပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရပိုင်းက လုံခြုံရေးတွေအတွက် ပြည့်ပြည့်စုံ စုံ ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းမှာပါ။အခုနိုင်ငံတကာကြားဝင်ဖို့တောင်းဆိုနေတာတွေကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ပါတယ်။စစ်တပ်၊ဒါမှမဟုတ်ရဲ၊ ဒါမှမဟုတ် သင့်တော်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကို လုံခြုံရေးတာဝန်နဲ့ရပိုင်ခွင့်ပြည့်ပြည့် ၀၀ပေးပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းသိမ်းခိုင်းမယ်ဆိုရင် ရွှေပြည်မျှော်တိုင်းမဝေးတော့ပါပြီ။
pn wara on October 31, 2012 at 3:40 pm
ဦးနေ၀င်း – ဦးနု တို့ မရှိတော့လို့သူတို့ ကို ထားခဲ့ပြီး အငြင်းမပွားချင်သော်လည်း ဦးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စမှာ ဦးနု နဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်တဲ့ ကိစ္စလို့ ထင်တယ်။ ၁၉၅၈ တုန်းက ဥိးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းဘို့ ကြံစီစဉ်က ဦးနု မှ ဦးနေ၀င်း ကို အာဏာသိမ်းလျှင် စစ်တပ်နာမည်ပျက်မယ်- မသိမ်းပါနဲ့ - ဥပဒေနဲ့ အညီ အာဏာလွှဲပေးပါမယ်- ဗိုလ်ချုပ်က အ်ိမ်စောင့် အစိုးရ တာဝန်ယူပြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ပါ။ ခြောက်လပြည့်သည့်အခါ ဥပဒေ အတိုင်း လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ-တဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ -ပေးပါလို့ တောင်းဆို ကတိပြုခဲ့ကြပြီး အာဏာလွှဲခဲ့တာလို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ဗိုလ်နေ၀င်းက ၆လအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဘို့ အချိန် မလုံလောက်ဘူး- ၂-နှစ်အထိ အချိန်တိုးဘို့ ပြောဆိုတာကြောင့် ၁၉၆၀ ခုနှစ်ရောက်မှ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ မေးစရာဖြစ်လာတာက
ဦးနေ၀င်းသည် ၁၉၅၈ မှာ အာဏာသိမ်းဘို့ကြံစီခဲ့သူဖြစ်ပါလျှက် ဦးနု က ဘာကြောင့် ဦးနေ၀င်း ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိရသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပေါ်လာတယ်။ နောက် တခုက ဦးနု က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းတိုက်တွန်းအကြံပေးတာကို လက်မခံလိုဘူး။ ဒါကို သူကိုယ်တိုင် မပြောဘဲ ယာယီ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးဘဆွေ ကို ပြည်ထောင်စု စက်မှူ ညီလာခံတခုမှာ ပြောခိုင်းလို့ဦးဘဆွေ က ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး ပေါ်လစီ ဟာ တယောက်နဲ့ တယောက် သတ်ဖြစ်ကြလို့လူတွေ တယောက်မှ မရှိတော့ဘဲ -နိုင်ငံဟာ သုဿန်တစပြင်လိုဖြစ်နေမည့် ငြိမ်းချမ်းေ၇းမို့နိုင်ငံတော် အစိုးရ အနေနဲ့ဆရာကြီးတင်ပြတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမူကို လက်မခံနိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်။ ဦးဘဆွေ က အဲဒီလို ဆရာကြီးရဲ့မူဝါဒ ငြင်းပယ်ချိန်မှာ ဦးနု က သတင်းစာဆရာတွေနဲ့ဆရာကြီးထံ ရောက်နေလာပြီး ဆရာကြီးကို ဂါရ၀ ပြုနေတဲ့ အနေအထားမျိုး ဓါတ်ပုံထဲမှာ တမင် အကွက်ချပြီး နေထိုင်ပါတယ်။ နောက်နေ့ ထုတ် သတင်းစာတွေမှာ- အစိုးရ ၀န်ကြီးတွေအတွင်း ၀န်ကြီးချုပ်က ဆရာကြီးကို ဂါရ၀ပြုလေးစားတယ်။ ၀န်ကြီးတယောက်က ဆရာကြီး မူဝါဒကို ပစ်ပယ်တဲ့ ပုံစံ ဆန့် ကျင်ဘက် ဓါတ်ပုံ ၂ပုံ သတင်းစာတွေရဲ့ရှေ့ မျက်နှာဖုံးမှာပါလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ -ဦးနု နှင့်- ဦးနေ၀င်း တဦးနဲ့ တဦး အပေးအယူ နဲ့အာဏာသိမ်းတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ဦးနေ၀င်းက ဘဲ ဖက်ဒရယ် မူ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ကို ခြေခြေမြစ်မြစ် မသိလို့အာဏာသိမ်းသလော- သိပါလျှက်နဲ့အာဏာရူးလို့သိမ်းလေသလော ဝေခွဲ မရကြောင်းပါ။ ဦးနု- ဘယ်လိုဘဲ ပုတီးကိုင်ကိုင် အာဏာမက်တော့ သေခြာပါတယ်။ ဦးနေ၀င်းနဲ့ဗိန်မသာ လိမ်မသာ ထဲကဘဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်မိပါကြောင်း။
Zo Khup on October 31, 2012 at 8:00 pm
I wonderaBurmese Journalist dare to starts writing this issue.
Thanks to U Wunta
Sai Lao on November 1, 2012 at 9:53 am
You are Burmese hero journalist. Those are every Burmese should accept and make seen. If not peace in Myanmar is justadream.